JANAN OOGO WAA LA XIDHAY DABCASARNA WAA LA SOO DHAWEEYEY YAAB ADDUUN?????????
Thursday January 04, 2018 - 14:13:36 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Waxaan maqli jiray nin noolow maxaa aragti kuu laaban .Somaliland halgan aad u qadhaadh ayeynu u soo marnay oo cadawgii aynu is haynay inoogu talagalay
Waxaan maqli jiray nin noolow maxaa aragti kuu laaban .Somaliland halgan aad u qadhaadh ayeynu u soo marnay oo cadawgii aynu is haynay inoogu talagalay in ay ina masaxaan oo aan dib la inoo arag haddii ay u suura gali lahayd nasiib wanaag waynu guulaysanay wadankeeniina dib baynu u helay cadawgeeniina waa jabay .
Cadawga Somaliland naceybka ay inoo qabaan wax la qiyaasi karo maaha kolba nooc bay inoogu imanayaan iyaga oo iska dhigaya mar sheikh,Muslim , qaraabo , daris iyo wax la mid ah intaana waxay isku dayayaan in ay hadaan inaga tuuraan oo balaayo inagu dhacdo . bal ka waran qof inoo rajaynaya habeen iyo maalin shar iyo xumaan iyo jab meesha ugu hooseeysa ina gaadhsiiya oo inagu dhaca laakiin aanad adigu ka war hayn.
27 kii sano ee Somaliland jirtay dhaqaale bur bur bay inagu hayeen iyaga oo wax ay inagu soo darsadeen jirin ayey wixii aynu lahayn oo dhan qaateen . xilal baynu u dhiibnaa marka mid kale oo iyaga ah lagu badalana wuu cararaa haddii wax hanti ah inoo hayey jirtana wuu la cararaa xitaa haddii ay tahay laba gaadhi waayo isagu uma joogo qadiyad kale ee mushaarka aynu siino ayuu meesha u joogaa ee qadiyad kale ma leh.
Aan u soo noqdo arinta ninka aan u haysto in uu ugu mudan yahay sharaf Somaliland maanta kaas oo ah Janan Oogo. Janan Oogo halgamaa baa dhalay aabihiina waxaa dilay faqashtii wadanka haysatay isagana halkangii hubka markii uu dhamaaday ee uu bilaabmay kii afka iyo mu aamarada ayuu bilaabay in uu kula dagaalamo afka kuwii aynu iska erinay ee meelahaas aynaan gaadhi Karin u yaacay .Waxuu ahaa nin ilaahay aftahamo siiyey oo Somaliland difaaceeda kaalinta kowaad ka galay cadawyga Somaliland ay aad ugu qayliyeen . waxuu ahaa safiir Somaliland kuwa ugu wax qabad badan cadawga Somaliland oo dhamina barteen . Janan Oogo wuxuu ahaa geesi geesi dhalay . Dadka lagu magacaabo in ay Somaliland Safiir u yihiin ee dibadaha joogaa lacag baa la siiyaa iyaga oo aan waxba qaban laakiin waxaas oo dhan wuu ka mudan yahay Janan Oogo waxay ahayd in Janan Oogo lacag fiican lagu siiyo shaqada uu u hayo Wadanka oo aanu wax kale ku mashquulin .
War aan maqlo waxaa ugu xumaa baryahan waxaa Hargeysa lagu xidhay Janan Oogo iyo waxaa Hargeysa lagu soo dhaweeyey Dabcasar bal warkaas eega qof fayow maskaxdiisa ma galaysaa . Anigu laba arimood uun baan u qaatay in ay dhaceen in waxani dhaccaan taas oo ah in aynu nahay dad sixran oo aan miyir qabin iyo in bari horeba qoladii aynu moodnay in aynu iska xoraynay wadankii dib inooga qabsatay inaga oo aan ogeyn oo ay koodiina soo dhaweynayaan keeniina xidhayaan . Anigu labadaas kan ay tahay kalo garan maayo laakiin waxba gacanta inooguma jiraan. Waxaa igaga sii darnaa markaan arkay Dabcasar oo Airportka hargeysa lagu soo dhaweynayo oo waliba ay soo dhaweynayaan kuwii Airportka madaxda ka ahaa kuwaas oo ila hadda meeshii madax ka ah .
Waxaan fahmi kari lahaa Janan Oogo ayaa Airportka Hargeysa lagu yar qash qashay oo dad madax ah oo aan garayn baa ku gafay waana la xidhay dadkaas oo waa loo sheegay Janan Oogo qofka uu yahay iyo waxaa uu Somaliland ka mudan yahay . Waxaan kula dar daarmi lahaa Janan Oogo in hawshii aad haysay sii kordhiso mooyaane aanad waxba ka dhimin meesha waa laba mid uun in laynaga qabsaday wadankii oo aynaan ogeyn iyo in la ina sixray . Waxaa lagu xidhay adiga oo aroos ah oo ay tahay wakhtigii kuugu farxada badnaa waa lagu katiinadeeyey oo lugaha ayaa lagaa xidhay waxaana laga yaabaa kuwa ku xidhay in ay ahayeen kuwa inaga ah laakiin laaluush ka qaatay cadawgii aad cadha galisay waayo wadankii laaluush qaataha ayaa badan maanta . waxaa dhici karta in xaakimka ku xukumayaa yahay nin u shaqeynaya cadawgii aad soo cadho galisay waxaa kale oo dhici karta in booliska ku ciqaabayaa yahay nin isna u shaqeyna cadawgaas markaas aduunka waxaa ka jira wax la yidhaa (Agent ruler )
Waxaa maanta Wasiirada Somaliland ku jira mid aan ka duwayn Dabcasar oo isaga oo halkan shirqool ka dhan ah Somaliland ku jira lagu yidhi waxaaba lagu magacaabay wasiir markaas ayuu cararay goor aan habeen iyo maalin midna ahayn isaga oo doonaya oo kaliya mushaarka uu inaga qaato
Waa salaaman tihiin dhamaan bahda Hadhwanaagnews
Abdilahi Good Cilmi